आयोगले पूर्व मनोनयनका लागि यसअघि निकालेको नर्सिङ र विदेशी कोटाको म्याचिङ लिष्टमा गडबडी, नयाँ लिष्ट निकाल्यो | Nepali Health
आयोगले पूर्व मनोनयनका लागि यसअघि निकालेको नर्सिङ र विदेशी कोटाको म्याचिङ लिष्टमा गडबडी, नयाँ लिष्ट निकाल्यो
२०७८ असोज ५ गते ९:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ५ असोज । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्व मनोनयनका लागि यसअघि प्रकाशित गरेको चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रबृत्ति तथा विदेशी कोटाको म्याचिङ लिष्टमा गडबडी देखिएको छ । एक साता अघि निकालेको लिष्टमा गडबडी देखिएपछि पुन: अर्को लिष्ट निकालेको छ ।
आयोगले २८ भदौमा प्रकाशित गरेको पूर्व मनोनयनको लागि प्रकाशित गरेको म्याचिङ सूचीमा गडबडी देखिएको हो । आयोगले ४ असोजमा सूचना प्रकाशित गर्दै ५ देखि ७ असोज भित्र पूर्व मनोनयनमा परेका विद्यार्थीले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुईटेलले एक साता अघि निकालेको सूचनामा विएस्सी नर्सिङ, विएन लगायतका केही विषयका सूची र केही विदेशी कोटाको र्‍याङ्कमा गडबडी देखिएपछि नयाँ सूची प्रकाशित गरेको बताए ।
‘पहिले हामीले सूची मात्रै निकालेका थियौँ । तर विद्यार्थीलाई पूर्व मनोनयन गर्नका लागि कोड नं दिईसकेका थिएनौँ । गडबडी भएको थाहा पाउने वित्तिकै त्यसलाई हटाएका थियौँ । अब अहिले विद्यार्थीहरुलाई मनोनयनमा आवद्ध हुनका लागि कोड समेत पठाएका छौँ । अव ७ असोज भित्र उनीहरुले म्याचिङ लिष्ट हेरेर स्वीकार गर्ने वा नगर्ने जानकारी दिनु पर्छ,’ उनले भने ।
आयोगले पूर्व मनोनयनका लागि निकालेको नयाँ म्याचिङ लिष्ट यस्तो छ :
डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स के हो ? बिरामीलाई सरकारले के सुविधा दिएको छ ?
गुल्मी : अक्सिजन प्लान्ट अभियानमा एक करोड संकलन